Akụkọ - Gịnị bụ njirimara nke nnukwu ngosipụta LED?
1. Ihe ngosi LED nke dị n'èzí nwere ọtụtụ ngosipụta otu LED, yana pikselụ pikselụ buru ibu. Nkọwa ndị a na-ejikarị bụ P6, P8, P10, P16, wdg. E jiri ya tụnyere ihe ngosi ọkụ LED pere mpe, uru nke nnukwu oghere dị ọnụ ala. Ọnụ ego kwa square nke nnukwu ngosipụta ọkụ LED dị ala karịa nke ngosi ngosi LED pere mpe, ebe nnukwu ihuenyo n'èzí nwere ogologo nlele ogologo, dịka 8m, 10m, wdg, na-ekiri foto na nnukwu ihuenyo site na tere aka, a gaghị enwe mmetụta “ọka”, na onyonyo doro anya.
2. Mkpuchi zuru oke na nnukwu ndị na -ege ntị. A na -etinyekarị ngosipụta ọkụ LED n'èzí dịtụ elu n'ebe dịtụ elu, ihuenyo ahụ pere mpe, akụkụ nlele dịkwa nnukwu, n'okpuru ọnọdụ nkịtị, a na -ahụ ntụzịaka kwụ ọtọ site n'akuku vidiyo ogo 140, a ka na -ahụ foto ahụ nke ọma, nke na -eme nnukwu ihuenyo Ngosipụta ọdịnaya nwere ike kpuchie oke sara mbara ma rute ọtụtụ ndị na -ege ntị. Akụkụ a dị mkpa bụkwa otu n'ime ihe kpatara na ọtụtụ azụmaahịa dị njikere ịhọrọ nnukwu ngosipụta LED n'èzí iji gosipụta ọdịnaya mgbasa ozi.
3. Enwere ike idozi ihie ihuenyo na -akpaghị aka. Nnukwu ihuenyo LED arụnyere na mpụga ga-emetụta ihu igwe n'èzí. Dịka ọmụmaatụ, nchapụta dị n'èzí dị iche n'etiti ụbọchị anwụ na -acha na udu mmiri, ma ọ bụrụ na -enweghị ike ịhazigharị nchapụta ngosipụta ahụ, mmetụta ya ga -adị iche n'okpuru ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, ma ọ bụ ọbụna belatara nke ukwuu. Ka ịghara imetụta mmetụta nlele nke ndị na -ege ntị lekwasịrị anya, ngosipụta nnukwu LED ga -enwe ọrụ mmezi ọkụ na -akpaghị aka, ya bụ, dị ka ọnọdụ ihu igwe dị n'èzí, a na -edozi nchapụta ihuenyo na -akpaghị aka iji nweta ngosi kacha mma. mmetụta.
4, dị mfe idobe (n'ozuzu a na-enwe ndozi ọzọ, mana ọ na-adịkwa ndozi). Ọnụ ego nke ịwụnye nnukwu ihe ngosi ọkụ LED n'èzí adịghị ala, site na narị puku ruo nde. Ya mere, mmezi dị mfe dị oke mkpa maka nnukwu ngosipụta LED. Ọ dị mkpa iji hụ na arụrụ ọrụ ngosi ogologo oge kwụsiri ike. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, enwere ike idobe nnukwu ngosipụta LED n'èzí ma emesịa, a na -echekwa ụfọdụ ngosi tupu na mgbe, n'ezie, enwere ike nweta mmezi ihu na azụ. Dịka ọmụmaatụ, usoro Huamei Jucai JA na -egosipụta ihe ngosi ọkụ LED nwere ike nweta mmezi n'ihu na azụ.
5, ọkwa nchekwa dị elu. A naghị atụ anya gburugburu ebe obibi, ebe oke okpomọkụ dị n'ebe ụfọdụ na ụbọchị mmiri ozuzo n'ebe ụfọdụ. Ya mere, ọkwa nchekwa nke nnukwu ihe ngosi ọkụ dị n'èzí kwesịrị ịdị n'elu IP65 iji gbochie mmiri mmiri ịbanye na ihuenyo. Mgbe ị na-etinye, tinyekwara anya na nchedo ọkụ, ntinye mgbochi mgbochi na ihe ndị ọzọ.
Na nkenke, nnukwu ngosipụta LED n'èzí na -enwekarị njirimara ndị dị n'elu. N'ezie, ngosipụta dị n'èzí nke ndị nrụpụta ihe ngosi LED dị iche iche mepụtara ga -enwe ọrụ ndị ọzọ dị iche iche, dị ka ịchekwa ike na oriri ike. Mana njirimara ndị a dị n'elu bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu ihuenyo niile nwere nnukwu LED. Site na ọbịbịa nke oge 5G, anyị kwenyere na nnukwu ihuenyo LED ga -emepe ọtụtụ ọrụ na atụmatụ iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche.